असोज २ गतेदेखि मलमास, त्यो बेला के गर्ने? के नगर्ने? – Satyapati
काठमाडौं । यस वर्ष असोज २ गते शुक्रबारदेखि ३० गते शुक्रबारसम्म मलमास अथवा अधिकमास परेको नेपाल पञ्चाङ निर्णायक समितिले जनाएको छ। ज्योतिषीय गणनाअनुसार ३६५ दिनको वर्ष हुन्छ।